Bamashele ukunganakwa kwabantu besifazane | News24
LAST UPDATED: 2019-04-24, 12:05
Bamashele ukunganakwa kwabantu besifazane
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAmalunga eNehawu esiShayamthetho emasha ngoLwesihlanu olwedlule.
INYUNYANA iNational Education, Health and Allied Workers’ Union (Nehawu) igubhe usuku lwabantu besifazane esiShayamthetho saKwaZulu-Natal ngokuthi ibe nemashi elwisana nokungaphathwa kahle kwabantu besifazane kanye nokunganakwa kwabo.
Le mashi ibiyingxenye yokugubha usuku lwabantu besifazane umhlaba wonke nolwalungo mhla ziyi-8 kuNdasa (March).
Imashi isuke ezinkundleni zemidlalo yaze yayophelela eCity Hall nalapho befike bahambisa khona uhlu lwezikhalo zabo kubuholi basehhovisi likaNdunankulu.PHAKATHI KWEZIKHALO ZABO KUBALWA:
• Ukungahlonishwa kwabantu besifazane abashona belwela inkululeko ngesikhathi sobandlululo.
• Ukungaqashwa kwabantu besifazane abakhubazekile esiShayamthetho saKwaZulu-Natal.
• Ukungabikhona kwabantu besifazane abaningi ezikhundleni eziphezulu.
• Ukwenziwa kwetshe lesikhumbuzo eduze kwase-City Hall nelizobhalwa amagama kanye neminyaka yabantu besifazane ababeyizishoshovu zepolitiki.
UNobhala weNehawu esiShayamthetho saKwaZulu-Natal uMnu Nkanyiso Ntuli uthe le mashi abayenzanga bodwa kodwa bahlanganyele nenhlangano yabafundi iSasco, ANC Women’s League, Pacsa, kanye nomakadebona be-ANC.
Uthe banqume ukuthi bagubhe usuku lwabantu besifazane ngokuthi babambe imashi.
“Ngesikhathi sibamba le mashi sikhethe ukuba sihambe ngomgwaqo uJabu Ndlovu nowawaziwa ngokuthi uLoop Street ngaphambilini.
“Into eyenze ukuba sihambe ngalo mgwaqo yingoba uJabu Ndlovu uyena kuphela umuntu wesifazane osahlonishwe ngokuthi kube khona umgwaqo obizwa ngegama lakhe,” kubeka yena.
UMnu Ntuli uthe lincane iqhaza elidlalwa uhulumeni wesifundazwe ekutheni athuthukise abantu besifazane ngokuthi ababeke ezinkundleni eziwumgogodla kuphinde kuqashwe nabantu besifazane abakhubazekile.
“Lokhu akuthinti nje kuphela ihhovisi likaNdunankulu kodwa kuthinta nesiShayamthetho saKwaZulu-Natal ukuthi njengoba kuyiyona indawo eshaya umthetho kumele engabe bahamba phambili ekuthuthukiseni abantu besifazane kodwa asibaboni benza lokho.
“Sifuna ukuthi uhulumeni wesifundazwe kube yizona zonke izinto azibhekisisayo lezi, ikakhulukazi iqhaza elidlalwa abantu besifazane,” kubeka yena.
Uhlu lwezikhalo lwamukelwe uMnu Sbusiso Ngubane noyiSekela likaMqondini ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe uMnu Willies Mchunu, nothembise ukuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi luyafika ezandleni zikaMchunu kuphinde kusetshenzwe ngendlela ukuze kuzoxazululeka izinkinga abantu abakhala ngazo.